Dagaal dhex-maray Al-Shabaab & Ciidamada Kenya - Awdinle Online
Dagaal dhex-maray Al-Shabaab & Ciidamada Kenya
Xubno ka tirsan Ururka A-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay weerar ku qaadeen Saldhig weyn oo Ciidamada Kenya iyo kuwa Maamulka Jubbaland ku leeyihiin degaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Weerarka kadib ayaa waxaa la sheegya in uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada Kenya iyo kuwa Maamulka Jubbaland oo dhinac ah iyo Al-Shabaab, waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta oo u badneyd mid culus ay ka maqlayeen halka lagu dagaalamay, hayeeshee aysan si rasmi ah u cadeyn Karin khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland oo Warbaahinta la hadlay waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab, isla markaana dagaalkii dhacay ay khasaaro ku gaarsiiyeen.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, isla markaana goobta lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan Ciidamada Kenya iyo kuwa Maamulka Jubbaland.
Previous articleQaramada Midoobay oo farriin u dirtay Ra’iisul Wasaaraha Cusub
Next articleMaxay ka wada hadleen Axmed Madoobe & Guddoomiyaha Aqalka Sare?